Luba Fiqaaduu Gurmeessaa, abbaa hafuuraa waldaa kristiyaanaa warra wangeelaa oromoo osloo irraa.
Yesus krstoositti kan jaallatamtan amantootaa! Baga Waaqayyo nagaadhaan ayyaana dhalachuu Gooftaa keenyaa Yesus kristoos isa bara 2015 fi waggaa haaraa isa 2016 tiin isin gae!
“Hin sodaatinaa! […] saba hundumaaf kan ta’uu, mandara Daawititti Fayyisaan isiniif dhalateera, inni immoo kristos gooftaa dha” Lk. 2:10, 11.
Biyyi lafaa waan nama sodaachisaniin guutuu dha. Ilmoo namaas ta’e yks uumamni lubbuu qabu hundi, jiireenya isaaf waan sodaatan in qabaata. Sodaan kan nama gammachiisu utuu hin taane, kan nama naasisuu dha. Naasuun sodaachuu irraa madda. Namni hafuura sodaan guutame dhaabachuu hin danda’u. Battalatti amalli(behavior) isaa jijjiiramee waan godhu hin beeku. Sammuun isaa sirritti waan hin yaadneef lubbuu isaas kan biroos oolchuu hin danda’u.
Sodaan nagaan dhibamuu irraa madda. Namni yeroo lolaa fi oduu lolaa dhaga’u, hawwaasi nagaa dhabee jeeqamu, mootummaan abbaa irree mirga dhala namaa yommuu sarbu, in sodaata. Namni rakkina ta’aa jiru sodaatee, jalaa miliquuf, karaa, iddoo itti kooluu galee nagaan jiraachuu danda’utti socho’a. Namni akka waan du’a ooluu, yeroo dhukkuba qoricha hin qabne(virus) irraa dhufu, nama kan ajjeesu dhaga’uu, balaa konkolaata, balaa dooniin liqinfaamuu, balaa xiyaaraan dhumuu fi balaa uumamaan dhufuun du’uu sodaatee in raafama.
Sodaan walumaa galatti, hafuura, hamilee fi qaama namaa irratti dhiibbaa guddaa qaba. Kanaafuu waaqayyoo inni jiraataan, inni hundumaa danda’u biyya lafaa isa nama sodaachisu jalaa nama baasuuf jecha, tokkicha ilma isaa Yesus Kristoosiin gara biyya lafaatti erge. Fayyisaan biyya lafaa/saba hundumaa kan ta’e Yesus Kristoos Betlihem mandara Daawititti, Mariyam durba irraa yeroo dhalate, Ergamoonni waaqaa misirachoo yero o tiksitoota dammaqanii hoolota isaanii diinaa isaanii irraa eeggatnitti himan "Hin sodaatinaa!”, Fayyisaan isiniif dhalateera, innis kristoos Gooftaa dha jedhanii labsan.
Ergichi fi sagalichi kan nama jajjabeesuu dha. Sababiin isaa sodaan ejjeennoo namaa raasa. Haa ta'u iyyu malee, GooftaaYesus Kristoos inni Gorsaa, dinqii, waaqayyo-jabaa, abbaa bara baraa, angafa nagaa ta’ee biyya lafaa dhufe kun sodaa du'aa jalaa nama baasa. Gooftaa Yesus «Warra foon namaa ajjeesanii lubbuu garuu ajjeesuu hin dandeenye hin sodaatinaa!; garuu, erga ajjeesee booddee adaba barabaraatiif qiliileetti darbachuudhaaf aboo isa qabu sodaadhaa!» jedha (Mat10:28a; Lk12:5b).
Yeroo ammaa guutuummaan biyya lafaa nagaan boora'uu irraan kan ka’e jeqamsatti jirti. Yeroo loliisaa,yeroo dhalli namaa garmalee ajjeefamu, qabeenyaan barbadaa'u, aadaa fi mirga hawwaasa tokkoo sarban, baayyeen kan aadaan, gochaa suukanneessaan guyyaati gara guyyaatti kan nama mudatu dha.
Keesumaa amma, saba Oromoo irratti dulli addaa, mirga aadaa fi seenaa Oromoo dhabsiisu, duulli duguuggaan sanyii fi lafa isaa irraa fudhachuuf geggeefamaa jiru kana, amantoonni sodaa fi naasuu malee, jabaatee dhaabbatee hafuura hamaa dugda mootummoota duubaan goree uummata keenya dhiphisaa, gara jabinaan ajjeesaa, mana hidhaatti galchaa jiru kanaan mormuun bira dhaabachuu fi bakka dhimmi isaa ilallatuttis iyyachuun itti gaafatama Oromoo maraa fi itti gaafatama waldaa kristiyaanaa hundumaa ti.
Yesus Kristoos fayisaa biyya lafaa, inni nagaa keenya numre ta'e, araaraa fi nagaadhaan gara saba dhumaa, beelaa'aa jiru haa ilaaluu. Ayyaan dhaloota Gooftaa keenyaa Yesus Kristoos isa 2015 baga isin ga’e jechaa, waggaa haaraa itti galuuf jennu kana immoo, Waaqayyo waggaa mo’umsaa, waggaa nagaa, kan milkaaummaa fi kan eebbaa akka isiniif taasiisu hawwa koti.
Luba Fekadu Gurmessa Ofgaia.
Yesus krstoositti kan jaallatamtan amantootaa! Baga Waaqayyo nagaa dhaan ayyaana dhalachuu Gooftaa keenyaa Yesus kristoos isa bara 2014 fi waggaa haaraan isin gae!
Bara 2014, waaqayyoo, mana mana keenyaatti, waldaa keenyatti yeroo konferaansii adda addaa qabaannetti sagalee isaan nu barsiisaa, nu eebbisaa,yaada gaarii nuf qabus mul’isaa ture. ”Egaa ani sii wajjin waanan jiruuf hin sodaatin! Ani waaqayyo kee ti hin na’in! Ani sin jabeessa, ani sin gargaaras irree qajeelummaa koo isa mirgaatiin ol sin qaba ” jedhee inni saba dhuunfaa isaatti dubbatame, sagalichi ammas nu wajjin jiraachuu isaa mirkaneessa. (Isa.41:10).
Waaqayyoo hundee amantii fi jireenya keenya , isa amanamaa fi hin sochoonee, yesus krstoosiin nu jaallate. Yesus krstoos, kan itti amanu hundaaf ”Gorsaa dinqii, waaqayyo-jabaa, abbaa barabaraa, angafa nagaa”(Is.9.6b) dha. Angaafi nagaa kun barri waaqayyo akeekkate yeroo ga’etti sanyii daawwit keessaan mandara Daawwititti dhalachuu isaa ergamootaa waaqayyoon mul’iinatti labsame. Isaanis ”Hooqubaan waaqayyoof waaqa gubbaatti, nagaanis namoota waaqayyo itti gammaduuf, lafa irratti” (lk.2.14) jedhan.
Nus ayyaana dhalachuu yesus kristoos isa 2014 kana ergamootaa waaqaa wajjin faarsaa galataan waaqayyoof hooqubaa dhi’eesina, hangafa nagaa kanas gara keessa keenyaatti simanna; hundumtuus hangafa nagaa kana akka simatu hawwii keenya.
Yesus kristoos du’a moo'ee erga ka'ee booda bartoota hafuura sodaatiin guutamanii mana cufatanii utuu jiranii, yesus dhufee ,”nagaan isiniif haata’uisaaniin jedhe.si'a sadii yeroo inni isaan jajjabeessu argina!”(W.Y 20:9,21,26).
Kristoosiin kan jaallatamtan hundi! Yesus kristoosiin kan qaban nagaa qabu. Nagaan hundee jireenyaati. Nagaan eebba qaba, Nagaan gatii guddaa qaba. Nagaan hundumaan olitti filatama.Yeroon kun yeroo da’imoonnii, maanguddoonni, uumamni Waaqayyoo hundi nagaa barbaadanii dha. Mootonni biyya lafaa, qaamni mootummaa fi miti mootummaan, qaabeenyaan biyya lafaa, nagaa kennuu hin dandeenye. Angafi nagaa inni ta'e yesus kristoos garuu akkas jedha.”Nagaa isin biratti nan hambisa, nagaa koo isiniif nan kenna; ani akka biyyi lafaa kennuttan isiniif kenna mitti, garaan keessan hin raafamin, hin sadaatinis (John 14:27).
Barri fuula keenya dura jiru kun bara Nagaa, eebbaa fi jaalalaa nuf haa ta'u!! Amen
Luba Fekadu Gurmessa Ofgaia,
Luba waldaa warra wangeelaa Oromo Oslo.